काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि सरकारपक्षधर नेता–कार्यकर्तामा सन्नाटा छाएको छ। सोमबारसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले सदर गर्ने शतप्रतिशत विश्वासमा रहेका नेता–कार्यकर्तामा मंगलबारको फैसलापछि निरासा र छटपटी सुरु भएको छ।
ओलीनिकट केही नेताले एउटा गोल मिस हुँँदैमा आफूहरुको भविष्य नसकिने बताए पनि अधिकांश नेताहरुले चरम निरासा व्यक्त गरिरहेका छन्। कतिपय नेता–कार्यकर्ताले देश पुस ५ गतेभन्दा अगाडिको स्थितिमा रहेको भन्दै फेरि पनि एकताको सम्भावना रहेको बताउन थालेका छन्। तर, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले यथास्थितिमा ओलीसँग कुनै सम्झौता नहुने कुरा स्पष्ट गरिसकेका छन्।
बाहिर मुख खोलेर भन्न नसके पनि ओलीनिकटका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले १० नेताका कारण आफूहरुको राजनीतिक जीवन धरापमा परेको निष्कर्षमा छन्। इतिहासदेखि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका र लामो राजनीतिक जीवन बोकेका नेता–कार्यकर्ताको भविष्य जोखिममा पार्न मुख्यतः ओलीका अति विश्वासपात्र नेताहरुकै भूमिका रहेको देखिन्छ।
१. केपी शर्मा ओली : ओली समूहका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठका कारण उनीनिकट करिब डेढ लाख कार्यकर्ताको भविष्य जोखिममा परेको छ। नेकपाका करिव ८ लाख पार्टी सदस्यमध्ये डेढदेखि दुई लाख पार्टी सदस्य ओली समूहमा रहँदै आएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले उनीहरुमा चरम निरासा देखिएको छ।
ओलीनिकट रहेका नेताहरु सुवास नेम्वाङदेखि प्रदीप ज्ञवालीसम्मले ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न सुझाएका थिए। तर, ओलीले उनीहरु कसैको कुरा सुनेनन्। बरु, उनीहरुलाई समेत जानकारी नदिई रातारात संसद विघटन गरिदिए। संसद विघटनको निर्णय गर्न बोलाइएको मन्त्रिपरिषदकै बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले विघटनको कानूनी र राजनीतिक वैधता विचार गर्न ओलीलाई सुझाएका थिए। तर, ओलीले उनको कुरा पनि सुन्दै सुनेनन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीले आफ्नै समूहका नेता–कार्यकर्तालाई ढाँटेर प्रतिगमनकारी कदमको पक्षमा उभिन लगाएका थिए। उनले आफूले दक्षिण छिमेकी भारत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना, नेपाली कांग्रेस लगायतका सबै शक्तिहरुको स्वीकृति लिएर संसद विघटन गरेकाले ढुक्क हुन भनेका थिए। जसलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहले संवैधानिक निकायहरुमा सेटिङको हल्ला चलाएर फैसला प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए।
तर, ओलीले यी सबै कदम केही नेताहरुको उक्साहट र गलत मनसाय परिपूर्तिका लागि गरेको बुझिएको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संवैधानिक आधार नहुँदानहुँदै पनि ओलीले विघटन गरेपछि उनीपक्षीय कार्यकर्ताले ‘हाम्रा बा सामान्य मान्छे होइनन्, पक्कै सबै कुरा मिलाएरै विघटन गरे होलान्’ भन्ने विश्वासमा बाँचिरहे। तर, मंगलबार जब ओलीको दाबी गलत प्रमाणित भयो, ओलीको विश्वासमा बाँच्नेहरुको बिचल्ली भएको छ।
२. ईश्वर पोखरेल : ओलीनिकट कार्यकर्ताको भविष्य सिध्याउने मुख्य भूमिका यसपटक पनि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले खेलेका छन्। प्रत्येकपटक सरकारमा जाँदा ‘कमाउधन्दामा व्यस्त’ देखिएका पोखरेलले यसपटक पनि ओलीलाई उचालेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा सक्रिय रहे। शारीरिक रुपमा अस्वस्थ रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै उनले राज्यका सम्पूर्ण साधनस्रोत दोहन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
रक्षामन्त्री रहेका पोखरेल बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा झर्न राजी हुनुको एउटै कारण थियो, प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार आउन सक्दैनन्। सिंहदरबारमा म नै छायाँ प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहन्छ, अनि यही मौकामा राज्यको सम्पूर्ण स्रोत आफूमा केन्द्रित गर्छु भन्ने विश्लेषण। यही विश्लेषणका आधार उनले बिना विभागीय मन्त्रीका हैसियतले राज्यको गर्नुसम्म दोहन गरे। ओम्नी प्रकरण, यती होल्डिङ प्रकरणदेखि मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरणसम्म पोखरेलले ‘मन फुकाएर’ भ्रष्टाचार गरेका छन्।
आर्थिक मामिलामा मात्र नभएर राजनीतिक मामिलामा पनि पोखरेल स्वयं केपी शर्मा ओली र उनको समूह सिध्याउन सक्रिय रहे। ओलीलाई कुनै हालतमा नझुक्न र साथमा आफू रहेको आश्वासन दिएर नेकपा विभाजन गराउन पनि पोखरेलले मुख्य भूमिका खेलेका छन्। बेला न कुबेला जबजको बहस छेडेर ओलीलाई अलगावमा पार्ने र ओली समूह सिध्याउने अभियानमा उनी द्रूतताका साथ अघि बढेका थिए।
३. रामबहादुर थापा : चर्चा र यथार्थमा कत्ति पनि संगति नभएका अर्का नेता एवं ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिकाले पनि ओली समूह रक्षात्मक बन्न पुग्यो। ओलीले संसद विघटनजस्तो प्रतिगामी र असंवैधानिक कदम चाल्दा रोक्न खोज्नुको सट्टा झन् उचाल्ने उनको भूमिका पनि कम हानिकारक छैन। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे पनि कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर मन्त्री देखिएका उनले अवसरवादी भूमिका प्रदर्शन गरेको उनीनिकटकै नेताहरुको आरोप छ। कहिले ‘बलात्कार सामान्य घटना हो, भइरहन्छ’ भन्ने त कहिले ‘संसद विघटनलाई महान् क्रान्ति’ भन्ने उनका अभिव्यक्ति पछिल्लोसमय सर्वाधिक विवादास्पद रहे।
ओलीलाई संसद विघटन गर्न उचाल्नेमध्ये थापा पनि एक पात्र थिए। ओलीसँग दशकौंको सहकार्य गरेका नेताहरुसमेत अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न मिल्दैन भनिरहेको बेला थापा भने ‘संसद विघटन महान् क्रान्ति, अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो, प्रचण्डलाई चिडियाखानामा थुन्छु’जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको केन्द्रमा रहे। ओलीलाई उचालेर ओली क्याम्प भत्काउन थापाको भूमिका पनि कम छैन।
४. टोपबहादुर रायमाझी : प्रतिनिधि सभा विघटनपछि असंवैधानिक मन्त्रीको सपथ खाएका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी यतिबेला ‘नमूना’ मन्त्रीका रुपमा चर्चित् छन्। सत्तास्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै तल्लो स्तरको दलाली र विरोध गर्न पछि नपर्ने उनको भूमिकाले पनि ओलीलाई उचाल्न भूमिका खेल्यो। ओलीलाई उचालेर प्रियपात्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा पूर्वमाओवादीका अरु मन्त्रीभन्दा रायमाझी अगाडि देखिएका छन्। सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरुमा प्रचण्ड–नेपाललाई कसले बढी गाली गरेर ओलीको विश्वास जित्ने भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो।
रायमाझी ओलीलाई गलत सल्लाह दिएका कारण मात्र होइन, मन्त्री बनेपछि उनका अभिव्यक्ति र गरेका कामहरुले पनि दुर्गन्धित बन्दै गएका छन्। ‘लोडसेडिङ कुलमानले होइन, मैले हटाएको हुँ, भूमिगत तारले लाखौं मान्छे मार्छ, भूराजनीतिक सन्तलुन मिलाउन तल्लो अरुण भारतलाई दियौं’जस्ता उनका अभिव्यक्ति सुन्दा हरेक देशभक्तको शीर झुक्छ। उनको गलत सल्लाहले ओलीले संसद विघटन गरेको र उनका गतिविधिले ओली क्याम्पमा निरासा छाएको छ।
५. मणिचन्द्र थापा : ओली सरकारका अर्का मन्त्री मणिचन्द्र थापा पनि लाखौं कार्यकर्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेल्नेमध्येका एक मतियार भएका छन्। कुनै बेला सांस्कृतिक रुपान्तरण र नयाँ ढंगको क्रान्तिको वकालत गर्ने मन्त्री थापा पछिल्लोसमय पद र पैसामा बिक्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ। उनलाई कतिपय नेताहरुले पेट पाल्नकै लागि ओली समूहमा लागेको भन्दै व्यंगसमेत गरेका छन्।
ओली समूहमा उभिएर थापाले श्रीमतिलाई आकर्षक जागिर लगाएको र बालुवाटारको पैसाले कोटेश्वरमा घर ठड्याएको अभियोग लगाउनेहरु पनि कम छैनन्। जीवनभर सांसदसमेत नभएका थापा एकैपटक मन्त्री भएपछि ‘विश्वविजेता’को रोमाञ्चक अनुभूति गरे पनि मंगलबारको फैसलाले उनको विजयान्दानुभूतिमा चिसो पानी खन्याइदिएको छ। थापा पनि ओली समूहका यस्ता नेता हुन्, जो ओलीले जस्तासुकै गलत काम गर्दा पनि शतप्रतिशत समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई गलत कदाम चाल्न उक्साउँदै आएका थिए। विचार र व्यवहारमा जहिल्यै तालमेल नमिल्ने उनको चरित्र फेरि एकपटक उदांगिएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।
६. विष्णु रिमाल : प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिमाल तीन वर्षको अवधिमा अधिक विवादित नेता हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समूहभित्र पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र सल्लाहकार रिमालको कुरा विशेष रुपले सुन्ने गरेको र उनीहरुले गलत सल्लाह दिँदा प्रधानमन्त्री फँसेको चर्चा बेलाबखत हुने गर्दछ। राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका रिमालको सबैजसो ध्यान कमाउधन्दामै केन्द्रित भएको भन्दै उनकै कार्यकर्ताहरुले चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन्।
पछिल्लोसमय ओलीले आफ्नो समूहकै नेताहरुको कुरा सुन्न छोडेर र पोखरेल–रिमालमा भर पर्दा अहिलेको दुर्घटना निम्तिएको भन्नेहरु पनि कम छैनन्। रिमाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमप्रति अनुदार रहेकै कारण पार्टी एकतामा पनि अनेकौं व्यवधान खडा भएका थिए। उनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘हामी मिलाउँछौं, कुनै हालतमा झुक्नु हुँदैन’ भन्दै भड्खालोमा हालेको अभियोग लागेको छ। रिमालको भूमिकाको कारण पनि आज ओलीनिकट लाखौं कार्यकर्ता बिचल्लीमा परेका छन्।
७. भानुभक्त ढकाल : ओलीका ‘एसम्यान’ मानिने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं हालका पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि ओली समूहलाई डुबाउनेहरुको सूचिमा अग्रपंक्तिमा छन्। अब्बल राजनीतिक क्षमता र भूमिका बिना नै उनी ओलीको छत्रछायाँका कारण एकाएक मन्त्रीमा आएका थिए। अन्ततः उनको कमजोर कार्यक्षमता नेपालकै इतिहासमा कलंकको टीको बन्न पुग्यो। मेडिकल सामानमा भएको भ्रष्टाचार र नक्कली सामान खरिद प्रक्रियाले सरकारको भ्रष्टाचारको काण्डमा अर्को काण्ड थपियो।
कोभिड–१९ को महामारीका बेला ढकालको भूमिका अत्यन्तै लज्जास्पद रह्यो। ढकाल आफैमा भ्रष्ट नेता नभए पनि उनको कमजोर कार्यक्षमताको प्रत्यक्ष फाइदा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उठाए। ढकालकै कार्यकालमा चीन सरकारबाट दिइएको अनुदानको मेडिकल उपकरण नल्याई सरकारले निजी कम्पनिसँग मेडिकल सामग्री खरिद गर्‍यो। सरकारको उक्त कार्यको चौतर्फी आलोचना भएपछि अन्ततः कोटेशन प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्‍यो। तर, त्यस्तो जघन्य अभियोगमा पनि ओलीले आफ्ना मन्त्रीको बचाउमा उत्रिए।
८. गोकुल बाँस्कोटा : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहलाई डुबाउने भूमिकामा बाँस्कोटाले सम्पूर्ण रुपले नकारात्मक भूमिका खेले। सरकारका प्रवक्ता रहेको अवधिमा उनले बोलेका हरेक अभिव्यक्ति विवादस्पद रहे। ओलीको प्रतिरक्षामा उनले जे–जति शब्द खर्चिए, ती सबै ओलीका लागि आत्मघाती सावित भए। तर, ओलीले काभ्रे नै पुगेर सिंगो देश एकातिर र बाँस्कोटा अर्कोतिर राख्दा बाँस्कोटाले पल्ला भारी भएको भन्दै जग हसाउने काम गरे।
सरकारको प्रवक्ता रहेका व्यक्तिको भूमिका र अभिव्यक्ति सन्तुलित हुनुपर्नेमा बाँस्कोटाले विरोधी कमाउने काम मात्र गरे। पत्रकारलाई नांगो गालीदेखि पार्टी एकता भाँड्न सम्पूर्ण रुपले क्रियाशील हुने उनको भूमिकाले ओलीलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो। पछिल्लोसमय सेक्युरिटी मेसिन खरिद प्रकरणमा हाकाहाकी ७० करोड घुस मागेपछि उनले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुप¥यो। उनको भूमिकाले ओली समूहलाई एकपछि अर्को रक्षात्मक बनाउँदै लगे पनि आजपर्यन्त ओलीले ‘धर्मपुत्र’भन्दा पनि माथिल्लो कोटीमा राख्दै आएका छन्।
९. महेश बस्नेत : ‘केपी शर्मा ओलीका लागि धरहराबाट हाम फाल्न तयार छु’ भन्दै दिनदहाडै सांसद अपहरणमा लागेका पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत पनि ओली समूह डुबाउनेमध्येका एक खेलाडी हुन्। बस्नेतले सम्पूर्ण रुपले ओलीको समर्थन गरे पनि उनका हरेक क्रियाकलापले ओलीको छवि कमजोर पारिरहेको छ। पार्टी एकतामा अनेकौं बखडा हाल्न ओलीलाई उक्साएर अन्ततः एकता भत्काउन सफल भएका बस्नेत गैरराजनीतिक चरित्रकै कारण आलोचनाको केन्द्रमा पनि छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पूर्वमन्त्री बस्नेतले बर्दिबास पुगेर संघीय समाजवादीका सांसद उठाएर काठमाडौं ल्याएका थिए। फिल्मी शैलीमा सांसद अपहरण गरेको घटना नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै चर्चित् रह्यो। उक्त घटनाले नेपालको शीर मात्र निहुराएन, ओली समूह अत्यन्तै रक्षात्मकसमेत बन्न पुग्यो। आफ्नो समर्थन गरेपछि आँखा चिम्लेर फुर्किने ओलीको स्वाभाव राम्रोसँग बुझेका बस्नेतले सांसद अपहरण गरेरै भए पनि बालुवाटारसँगको सम्बन्ध सुधारेका थिए। तर, उनको कदम ओलीका लागि महंगो सावित भयो।
१०. सूर्य थापा : प्रधानमन्त्री ओलीलाई डुबाउन सबैभन्दा सक्रिय भूमिका खेल्नेमा थापा पनि एक मानिन्छन्। ओलीले गत वर्ष नै बौद्धिक प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याललाई हटाएर थापालाई सल्लाहकारमा भित्राएका थिए। मोहनविक्रम सिंह, वामदेव गौतम, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि ईश्वर पोखरेल र केपी शर्मा ओलीको सत्ताकालमा घुम्दै सत्ताको दैलोमा आउन भ्याउने उनको अवसरवादी भूमिका चिन्न नसक्दा ओली समूह नै संकाटान्मुख छ। ओलीको सल्लाहकार भएको दिनदेखि थापाको भूमिका मिडियासँगको सम्बन्ध सुधार्न होइन, सम्बन्ध बिगार्न केन्द्रित रहँदै आएको छ।
अत्यन्तै संवेदनशील जिम्मेवारीमा बसेर पनि थापाले अत्यन्तै तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनको भूमिका र कार्यशैलीबाट विपक्षी मात्र होइन, ओली समूहकै ९० प्रतिशत नेता–कार्यकर्ता आजित भए पनि ओलीको संरक्षणका कारण उनले बेलगाव गालीशास्त्र प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्। ओली समूह आजको अधोगतितिर लाग्नुमा थापाको भूमिका पनि कम जिम्मेवार छैन।